UHeather Theurer kunye nombono wakhe wabalinganiswa beDisney | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Iimuvi zeDisney bezihlala zihlala egxile ebantwaneni, nangona befihle ngasemva kwemiyalezo ethile kuluntu lwabantu abadala ngakumbi. Ezo miyalezo bezikade zigqitha kwinto ebinzulu kwaye igcisa esinalo namhlanje liyabakhupha kancinci ukunika uAlicia okanye uPeter Pan ithoni emnyama.
Nangona ikumgangatho wobugcisa omkhulu wokupeyinta, umsebenzi kaTheurer unawo umoya ombi ngakumbi ukusizisela abalinganiswa abadala ngakumbi beDisney apho isigqebelo kunye nobubi zibaluleke kakhulu. Into emayithethwe yile nxalenye yomsebenzi wakhe yeyakwaDisney uqobo.
Upapashe nje isiqwenga esitsha esekwe kuAlice kwiWonderland athe wayibiza ngokuba "Siphambene sonke apha." Indlela yokubonisa impambano ehambelana nalo msebenzi woncwadi apho ukucinga kube yenye yeempawu ezintle.
Ezinye iziqwenga zakhe zivela kumdlalo bhanyabhanya onesibindi (onesibindi) kunye noPeter Pan. Imisebenzi emibini eqhubeka nokudlala ngokulunga okufanayo ngaphezu kweka-Alicia kwaye esikhokelela kweso sitayile. Umsebenzi weoyile kufanelekile ukuba siwukhankanye kwaye ukuba siya kwiwebhusayithi yethu siya kufumanisa ukuba idlala ngemisebenzi engaphezulu kodwa esemgangathweni opeyintayo.
Sele ndizise enye yemisebenzi yakhe kudala Kunye nomlingiswa oopopayi kwaye oko kubonisa indlela ukuzifundisa ngokwakho yenye indlela ukungena kwihlabathi lobugcisa kunye nokupeyinta. Ukusukela iwebhusayithi yakho Ungasondela kuwo wonke umsebenzi wakhe apho ubomi bezilwanyana, ubumnandi kunye nokusebenza kweDisney kuyinxalenye yeminqweno yakhe. Umzobi obonakalayo wokulandela ukuba ngokuqinisekileyo siya kubuyisa kula macandelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Abalinganiswa beDisney njengoko kubonwe nguHeather Theurer
Ngaba ezi zizona zilo zakha zambi?